Bụ Gmail N'ihi Business SMTP Ò Kwekọrọ n'Ozizi Ndị Actionetics - Foneelu Of The Day
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ isi na-eme gị Gmail azụmahịa akaụntụ iji SMTP compatibles na Actionetics, ọ dighi ihe kpọmkwem ma ọ bụ kpọmkwem na-eme ka nke a mee iji software utilities.
The SMTP ọrụ na-ugbu a na-akwado site Clickfunnels bụ Send adịgide, Mandrill, Amazon SES na Send13.
Ọ bụrụ na ị igwu miri n'ime ọzọ uzo ozo iji search engines, ị ga-ahụ na ọtụtụ weebụsaịtị na-emeso a dịruru ná njọ mgbe niile nwere ike ikwu na ị na-eji ọzọ software.
Bụ Gmail maka azụmahịa SMTP dakọtara na actionetics? Azịza ya dị nkenke bụ ee, ma ị ga-mkpa na Etison ụlọ iji mee ka ọ na-arụ ọrụ kwesịrị ekwesị.